The Ezi Wizard | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! The Ezi Wizard | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
The Ezi Wizard bụ egwuregwu na-anọwo na n'ihi na ezi a mgbe a dị ka a ala dabeere cha cha oghere egwuregwu. Ma, ọ bụ nnọọ na nso nso na o mewo ka ya ntughari ihe online cha cha ụgwọ site mobile oghere egwuregwu. The egwuregwu a na-mara dị ka Harry Trotter nke ụdị na-ekpughe na egwuregwu a bụ a parody nke ama akwụkwọ na nkiri usoro Harry Potter kere JK Rowling. Nke a oghere a nnọọ ihe ịga nke ọma na ya na ala dabeere igwe version, otú ezi bụ online otu? Ọfọn, na-agụ na chọpụta.
Banyere Developer nke Ezi Wizard
Ntụziaka Cha Cha bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu oghere egwuregwu na mmepe na United Alaeze. The ụlọ ọrụ dabeere na UK na-enye egwu egwuregwu na ikikere ka N'ime 100,000 casinos na Europe. Ụfọdụ n'ime ha kasị ama ohere mpere na-agụnye Top Cat na Winstrap.
Nke a bụ a oghere egwuregwu na 5 -esi anwụde na 20 akwụ edoghi. The egwuregwu bụ playable si ka ala dị ka 20p kwa atụ ogho ka ihe dị ka 200 £ kwa atụ ogho. Nke a cha cha ụgwọ site mobile oghere game ejisie ike ihe ikuku nke anwansi. Enwere 4 isi akara na egwuregwu. Ndị a bụ – A spellbook, a akpa ego juru, gold mkpụrụ ego na n'ikpeazụ a wizard okpu. E nwere ndị ọzọ ala uru akara nakwa nke na-e mara mma nke ukwuu otú ahụ oghere aha nke Harry Potter movies e dere.
E nwere ihe abụọ pụrụ iche na akara na nke a cha cha ụgwọ site mobile oghere egwuregwu. Onye mbụ bụ na anụ, nke bụ egwuregwu logo onwe ya na mgbe ahụ Ezi Daashi Icon nke-eme dị ka a akpalite na ihe niile na-bonus atụmatụ.
The ọhịa eme a dochie anya ndị ọzọ niile na akara ma e wezụga n'ihi na ikposa. The Ezi Daashi ikposa na aka nke ọzọ na-egosi naanị na iberibe Ọnụ esi anwụde. ma ọdịda 3 akara na niile 3 esi anwụde akpali kpokọtara Map bonus.
Ebe a, ị na-jụrụ họrọ otu n'ime ndị dị iche iche ụlọ. Otu na-ahapụ gị merie ego nwa anụmanụ mgbe ọzọ na-enye gị free spins. Ọ bụrụ na ị bụ n'ezie ndị na kechioma, ị pụrụ ọbụna ejedebe na-na-egwu na-aga n'ihu jackpot, na-eme ya otu n'ime ndị kasị akpali akpali akụkụ nke cha cha ụgwọ site mobile oghere egwuregwu.
Ọ bụ a na-ghar parody nke Harry Potter. Ọ na-akpa ọchị, ọ na-akpali akpali na-akpali akpali na-egwu n'otu oge. Isi online na-egwu a online cha cha ụgwọ site mobile oghere egwuregwu ugbu a.